बाबुराम भट्टराई लगायतविरद्ध साइबर अपराध मुद्दा प्रहरीबाट दर्ता गर्न अस्वीकार – Maitri News
बाबुराम भट्टराई लगायतविरद्ध साइबर अपराध मुद्दा प्रहरीबाट दर्ता गर्न अस्वीकार
Mohan Bastola April 27, 2020
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई लगायत नेताहरुविरद्ध साइबर अपराध मुद्दा प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । सत्तारुढ नेकपाका विद्यार्थी नेताहरुले दर्ता गर्न खोजेको मुद्धा प्रहरीले अस्वीकार गरेको हो । अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महर र सहसंयोजक रन्जित तामाङ लगायत युवाहरुको एक टोली पूर्वप्रधामन्त्री तथा डा. भट्टराई, पूर्वमन्त्री हिसिला यमी र उहाँकै पार्टीका विश्वदीप पाण्डे र आङकाजी शेर्पाविरुद्ध साइबर अपराधको उजुरी गर्न सोमबार काठमाडौ प्रहरी परिसर टेकू पुगेका थिए।
नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका नेता भट्टराईलगायत विरुद्ध अनेरास्ववियूका नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमा आपत्तिजनक कुराहरु लेखेको भनी उजुरी दिन खोजेका थिए। तर प्रहरीले गालि बेइज्जतिको विषय भएको भन्दै उहाँहरुलाई अदालत जान सुझाव दिएको स्रोतको भनाई छ ।
त्यसो त आइतबार भट्टराई, उनकै पार्टीका उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरुले पूर्व प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल, नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठले समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको अपहरण गरेको आरोपमा नेकपा काठमाडौं प्रहरी परिसरमैं उजुरी दिन पुग्नुभएको थियो । प्रहरीले उहाँहरुको पनि उजुरी नलिई फर्काएको थियो।
Previous Previous post: नेपाल प्रचण्डको ‘गोटी’ बन्दा नेकपालाई घाटा, प्रचण्डको रणनीति सफल
Next Next post: कोरोनाविरुद्ध लड्न सहयोग गर्ने चीनको प्रतिबद्धता